I-Waxun Power Technology Co, Ltd. | Waxun
I-Waxun ibekwe kwisiXeko sase-China sombane wase-Yueqing, kwiphondo lase Zhejiang. Thina umenzi ikakhulu ukuvelisai Umbaneal nokufakwa, intambo izixhobo, Ombane aphezulu kunye asezantsi iiseti ezipheleleyo zezixhobo zombane, ibhokisi yokuhambisa, ukukhula komngundo kunye noyilo, Njenge i Ukuqinisa uqinisa, PG uqinisa, ulwelo ukubhoboza uqinisa, iilogo zeekhebula kunye nezihlanganisi, isixhobo sokudibanisa esizenzekelayo kunye nezinye izixhobo zekhebula. Inkampani yethu ibonwabele igama eliphezulu kwicandelo elinye elinobungakanani obufanelekileyo, ixabiso elifanelekileyo kunye nekhredithi elungileyo, isenza ukwenziwa kulawulo kunye netekhnoloji.
Ishishini lizuze ukufikelela kwigridi kwigridi karhulumente nakwigridi esemazantsi, ngenkqubo yolawulo lwemveliso engqongqo kunye nenkqubo yolawulo olupheleleyo ekwaziyo ukuphuhlisa kunye nokuvelisa imveliso kunye nokuvunda, nokupasa uvavanyo lomgangatho we-ISO9001. Inkampani yethu ithumele iimveliso zethu emazantsi EMpuma Asia, iYurophu, iUnited States, iAfrika kunye namanye amazwe kwihlabathi liphela. Kwangaxeshanye, inkampani yethu ifumana igama elihle ekhaya nakumazwe aphesheya. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.
Lwela ukuba yinkokeli kushishino izixhobo izixhobo China
Ngomgangatho weklasi yokuqala, inkonzo yeklasi yokuqala, igama lodidi lokuqala kunye nabathengi ukuba basebenze kunye ukwenza iplani enkulu
Umsebenzi ococekileyo woLawulo lweeNkonzo zoKhuseleko loLawulo loMoya
Oko sigxila kuko
UMaxun wasekwa ngonyaka ka-2011. Ngumvelisi ophambili wasekhaya ofanelekileyo wombane ofanelekileyo kunye nezinto ezincedisa ngentambo.
Ngezixhobo zokuqhubekeka koomatshini kumazwe aphesheya kunye neqela leenjineli ezinamava, iYongjiu iyakwazi ukuvelisa imveliso eyahlukeneyo kunye nokubonelela ngeenkonzo zesiko ukuhlangabezana nemigangatho yengingqi kumazwe ahlukeneyo.
UMaxun ukhethekileyo kwi-R & D, kwimveliso kunye nentengiso ye-cable ye-cable kunye ne-cable connector, i-line fit, (iCopper, i-aluminium kunye nentsimbi), i-cable accessory, iimveliso zeplastiki, i-arrester light kunye ne-insulator kunye nomgangatho ovunyiweyo ohambelana ne-ISO9001.
Ukugxila kwizinto ezintsha, inkampani yethu iphumelele ngempumelelo amakhulu emveliso.
UMaxun ujolise kubathengi kwaye ukhethekileyo ekunikezeleni ezona zisombululo zifanelekileyo ngokusekwe kwiimfuno ezahlukeneyo kwintengiso nganye.
UMaxun useke uthungelwano lwenkonzo yokuthengisa evuthiweyo kumazwe angaphezu kwama-70 kunye nemimandla kwihlabathi liphela.